Gcina Ukholo, Matshi Phambili -Celebrating engama-11 ka-Shandong Senmao Machinery Co., Ltd - China Shandong Senmao Machinery
Ngomhla we-14 Meyi, 2018, ukuba kubhiyozelwe isikhumbuzo llth oko kwasekwayo Shandong Senmao Machinery Co., Ltd, usihlalo wethu, uMnu Dexue Ma, walungelelanisa kwabakhenkethi kwiNtaba Tai. Kwakhona yonyaka ixesha lokuhamba adibeneyo yenkampani.
Shandong Senmao Machinery Co., Ltd yi-lweshishini ehlanganisiweyo ngubani ezizodwa uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa isixhobo yolawulo oomatshini iinkuni-based. ikakhulu iimveliso zethu: umatshini kushushu cofa, umatshini cofa ebandayo, oluzenzekelayo umatshini yokukwazi ngamaplanga, oluzenzekelayo edge lokucheba wabona, umgca imveliso ibhodi eziphilayo kunye nezinye iintlobo ezininzi imigca yemveliso.
Sihambisana ucala eliphezulu uyilo indawo oomatshini, iimfuno kwizinga eliphezulu, iinkonzo ezikumgangatho ophezulu baze bazabalazele ukusebenzisa iteknoloji ophezulu kunye neenkonzo humanistic, ukudala uphawu-class ehlabathini.
Sinethemba iimveliso zethu uyakwazi ukwenza imimangaliso amatsha ukwenzela uphuhliso umsebenzi wakho.
Sijonge phambili kwintsebenziswano ixesha elide nawe ngokunyanisekileyo!